Minisiteran’ny Fitaterana : MITAZAM-POTSINY MANOLOANA IREO LOZA MIFANESY -
AccueilSongandinaMinisiteran’ny Fitaterana : MITAZAM-POTSINY MANOLOANA IREO LOZA MIFANESY
Minisiteran’ny Fitaterana : MITAZAM-POTSINY MANOLOANA IREO LOZA MIFANESY
31/01/2017 admintriatra Songandina 0
Mamoa-doza hatrany ireo fiara mpitatitra manerana ny Nosy. Saika ahitana sy ahenoana lozam-pifamoivoizana hatrany ireo lalam-pirenena mampitohy faritra maro eto Madagasikara. Indrindra fa ireo lalam-pirenena be mpampiasa toa ny RN2 sy ny RN4 ary ny RN7. Lozam-pifamoivoizana ahafoizana ain’olona maro no re matetika, efa saika ho isan’andro mihitsy aza amin’ireo fampahalalam-baovao isan-tokony manomboka amin’ny radio sy televiziona hatramin’ny gazety an-tsoratra sy amin’ireo tambazotra misy rehetra.
Tompon’andraikitra voalohany amin’izany anefa ny minisiteran’ny Fitateram-bahoaka tarihin’ny minisitra Benjamina Marcel Ramanantsoa. Tsy vao omaly na afak’omaly anefa no nisian’ny lozam-pifamoivoizana namoizana ain’olona maro fa misesy mihitsy izany amin’ny faritra maro. Mbola tsy nisy na dia fepetra iray hentitra navoakan’ny minisiteran’ny Fitaterana mahakasika ny fitateram-bahoaka ka mba ahafahan’ny mpandeha mandry ivohon’ny vato. Mbola tsy nisy didim-panjakana avy amin’ity minisitera ity nivoaka ka nahafan’ireo mpitatitra mitandrina amin’ny familiana. Tsy nisy ihany koa didim-panjakana nivoaka ho an’ireo kaoperativa isan-tokony amin’ny fanaraha-maso ireo mpamily sy ny fiara miasa ao aminy. Inona moa izany no tena andraikitr’ity minisiteran’ny Fitaterana ity? Tsy voafehy sa mody fanina amin’ny andraikitra sahaniny ireo tompon’andraikitra manomboka any amin’ny minisitra Benjamina Ramanantsoa? Any amin’ireny fitaterana entana an-tanety ireny anefa hain’ny minisitera tsara mihitsy ny mandray fepetra amin’ny famehezana ireo entana taterina amin’ny alalan’ny “pont bascule”.
Mampametra-panontaniana ny maro ihany mantsy ankehitriny ny mahatonga ireo lozam-pifamoivoizana mifanesy eto amintsika. Tsy misy izay tsy mivarahontsana raha vao mandre ny loza. Tsy manan-tsafidy anefa ireo mpandeha fa tsy maintsy manaraka ny onjany eny hatrany satria te ho tody any amin’ny faritra andehanany. Mipetraka ihany koa mantsy ny fanontaniana amin’ny hoe fiara toa inona ary fiara manao ahoana no afaka manao fitateram-bahoaka? Toa tsy mba misy didim-panjakana mametra izany akory avy amin’ny minisitera mpiahy ny fitaterana hany ka samy manao izany tiany amin’ny fitadiavam-bolany ka milaza azy ho mpitatitra daholo ity manana fiara lehibe rehetra ankehitriny. Tsy tokony mandalo sivana ve izy ireny ka tokony ho manana solontena amin’izany ny minisitera sy ireo rantsa-mangaika eo anivony?
Tokony mandinika lalina ny zava-misy ankehitriny manoloana ireo lozam-pifamoivoizana ny minisitry ny Fitateram-bahoaka fa tsy mitazam-potsiny.